I-Forth River Cottage-Bed and Breakfast ngasemfuleni - I-Airbnb
I-Forth River Cottage-Bed and Breakfast ngasemfuleni
Forth, Tasmania, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Sally
U-Sally Ungumbungazi ovelele
“Imifula iyakwazi lokhu: akukho ukuxhamazela. Sizofika lapho ngolunye usuku” AA Milne
Indawo yokuhlala ye-Five Star, nesidlo sasekuseni esiphelele, osebeni lwe-Forth River e-NW Tasmania. Ilungele umuntu omdala oyedwa noma ababili, i-Forth River Cottage itholakala imizuzu eyi-10 ukusuka e-Devonport kanye nehora elingu-1 ukusuka e-Cradle Mountain. Iyimfihlo, inokuthula futhi yakhelwe isihambi esiqaphela kakhulu. Shiya izinkathazo zakho ngemuva njengoba ungena emfuleni ogelezayo, ukushona kwelanga namadlelo aluhlaza. Ngeke ufune ukuhamba!
Konke ukunethezeka kwakho kubhekelelwe - ilineni eliwumbhede kanokusho, amathawula nemikhiqizo yokugezela yase-Tasmanian kanye nosizo lomshini wokuwasha, i-wi-fi yamahhala kanye nomabonakude wesathelayithi obanzi. Bheka inkanyezi njengoba ulele endaweni yokugezela ye-clawfoot ebekwe emphemeni ongaphezulu komfula noma uhlale eduze kwendawo yomlilo ebhongayo, ilungele ukujabulela iwayini elihlanganisiwe noma ushokoledi oshisayo kanye nama-marshmallows ashisayo. Jabulela ukudla kwasekuseni kwethu. Lokhu kuhlanganisa amaqanda amasha ezinkukhu zethu, ubhekeni okhiqizwe endaweni, utamatisi, amakhowe kanye nekhethelo lezithelo, iyogathi nokusanhlamvu kanye nezinongo eziphuma ekudleni kwethu okugcwele kahle. Sizohlinzeka ngenjabulo zonke izidingo zokudla uma sizicela. Jabulela isiphuzo setiye lekhwalithi ye-T2 noma i-espresso evela emshinini wethu wekhofi ngenkathi ubukele i-platypus idlala emfuleni.
I-Forth ibalwa njengelinye lamadolobha amahle kakhulu, kanye nelinye lamadolobha amadala eTasmania. Ibekwe osebeni lomfula Forth, ingamakhilomitha ayi-13 kuphela ukusuka edolobheni laseDevonport. Isibalo sabantu abangama-350 sikwenza kube uhlobo lwedolobha lapho wonke umuntu azi khona wonke umuntu futhi uzozizwa wamukelekile kakhulu. Izakhiwo eziningi zokuqala sezishintshiwe selokhu kwahlala abantu, kodwa kusenomlando oqinile mayelana naleli dolobha elidala. Enkabeni yalo mlando kune-Historic Bridge Hotel, okungesinye sezakhiwo ezidala kakhulu zedolobha futhi lisamile cishe ngendlela yalo yokuqala. Yaqale yanikezwa ilayisense futhi yavulwa ngo-1872, futhi ikwazile ukugcina ubuhle bezwe obudala nesimo salezo zikhathi zesikhathi esedlule. Isakhiwo empeleni sisohlwini lwamagugu futhi sithathwa njengengcebo yesizwe. Ibuye ithathwe njengenye yezindawo ezihamba phambili zomculo ezibukhoma eTasmania. Kungenjalo, jabulela ikhefi ephilayo etholakala eduze kwesakhiwo sokuqala seposi esahlehlela emuva ngo-1856.
Abanikazi bahlala eduze ukuze bathole usizo lapho kudingeka